रियलको नजरमा कामाभिंगा | Hamro Khelkud
एजेन्सी – पाँच महिना अघि रियल म्याड्रिडको नेतृत्वले भविष्यमा क्लबमा आवद्ध गराउन प्राथमिकतामा राख्ने गरि दुई खेलाडीको नाम तय गरेको थियो । जसमा रिनेर जिसस र अर्को इडुरार्डो कामाभिंगा रहेका थिए ।
ब्राजिलियन जिसस जनवरी २० मै रियलमा आवद्ध भइसकेका छन् । कामाभिंगा पनि ब्राजिलयकै पथमा रियलमा आवद्ध हुने सम्भावना रहेको बताएको छ । यदि कामाभिंगा रियलमा आबद्ध भए भने उनी सिधै सिरियर टोलीमै पर्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ । कासिमिरोलाई साथ दिनका लागि त्यो कदम उपयुक्त हुन सक्नेछ ।
तर युवा खेलाडीका लागि एउटा प्रश्न भने खडा हुन सक्दछ । १७ वर्षको खेलाडी के क्लबको त्यस्तो माग पुरा गर्न सक्षम हुन्छन् । यसलाई पहिलो प्रश्नका रुपमा हेरिएको छ । अर्को रियलका प्रशिक्षक जिनेदिन जिदानले यो उमेरमा उनलाई विश्वास गर्लान् ?
त्योसँगै तेस्रो प्रश्न पनि खडा हुन्छ । के जिदान अर्को सिजन रियलको प्रशिक्षकका रुपमा रहलान् ? त्यसका लागि रियलले यो सिजनको अन्त्य कसरी गर्छ भन्नेमा निर्भर गर्नेछ । जिदानको विकल्पका रुपमा माउरिसियो पोचिटिनोलाई हेरिएको छ ।
पहिलो प्रश्नमा फर्कौ जुनी कालाफाटको भनाई मान्ने हो भने कामाभिंगामाथि लामो समय देखि युरोपका क्लबहरुले चासो राखिरहेका छन् । उनी व्यावसायिक फुटबलका लागि तयार रहेको कालाफाटको भनाई छ । कालाफाटले कामाभिंगालाई १४ वर्ष उमेरदेखि पछ्याइरहेका छन् ।
रियलको प्राथमिकतामा रहेको शारीरिक क्षमता, टेक्निकल र मैदानको धेरै भागमा पुग्न कामाभिंगा सक्षम रहेको बताइएको छ । रियलले ५० मिलियनमा आसपासमा क्लबमा भित्राउने योजना राखेको बताइएको छ । तर अहिलेको अवस्थामा फुटबलमा यस्तै हुन्छ भन्ने अवस्था छैन ।
कोरोना भाइरस कोभिड १९ को विश्वव्यापी असरका कारण युरोपका सबै फुटबल गतिविधि ठप्प छ । फुटबल सुचारु भएपछि खेलाडी सरुवाका विषयमा युइएफए र फिफाले कस्तो नियम ल्याउने छ त्यसमा पनि भर पर्नेछ ।